Tena mbola ilaina ve ny hanao tranonkala amin’ny teny malagasy ? | WordPress.org Malagasy
Mombamomba : Iraka
Tena mbola ilaina ve ny hanao tranonkala amin’ny teny malagasy ?
Navoakan’i Sitraka ANDRINIVO tamin’ny 16 May 2020 17 May 2020 .
WordPress no CMS mampiodina maherin’ny 35% an’ny tranonkala amin’izao fotoana izao, sady mora ampiasaina indrindra. Anisan’ny ahitana azy betsaka ireo tranonkala, hatramin’ireo tranokalan’ny andrim-panjakana maro eto amintsika. Saika teny français foana nefa matetika no fampiasa amin’ireny tranonkala ireny, na ireo mampiasa WordPress na tsia. Misy aza mahavita mitantana teny maro ankoatra ny français, toy ny teny english na koa ny italiano ho an’ireo trano fandraisam-bahiny.
Misy ihany ireo blaogy vitsivitsy (tena vitsy) miezaka mizara amin’ny teny malagasy. Saingy matetika blaogy tsotra ihany ireo fa vitsy ny loharanon-kevitra iankinan’ny aina (andrim-panjakana, mpisehatra momba ny fahasalamana, fanabeazana, …) no manolotra tahirin-kevitra amin’ny teny malagasy.
Ny vinavina dia hoe :
Raha vitantsika ny mamoaka ny WordPress ho afaka ampiasaina amin’ny teny Malagasy dia :
Ho mora kokoa ho an’ireo mpampiasa tranonkala ny hanome vokatra amin’ny teny malagasy. Iriana mba hamporisika azy ireo hihamaro io.
Mety hihamaro kokoa ireo manan-katolotra nefa voasakan’ny teny vahiny teo aloha, no ho afaka hizara.
Ary rehefa mitombo ny mpamokatra dia hihamaro ny loharanom-pahalalana amin’ny teny malagasy azon’ny rehetra ho trandrahina, ka anisan’ny handray anjara amin’ny fampihenana ny elanelana amin’ny fahazoana fahalalana sy vaovao.
Anisan’ny tena ho amporisihina hitrandraka ity WordPress amin’ny teny malagasy ity ireo loharanom-pahalalana ifotoran’ny aina toy ny andrim-panjakana, ireo tranonkala azo antoka momba ny fahasalamana, ny fanabeazana, … Ahazoan’ny rehetra fahalalana amin’izay teny manakaiky ny fony.
And. 1 – Ireo sehatra miankina sy tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena (…) dia tokony hiezaka hanolotra ireo tahiri-kevitra ilaina ary handray ny fepetra rehetra hampihenana ny sakana ara-teny (…) mba ahafahan’ny rehetra mampiasa ny cyberespace amin’ny fiteny rehetra.
UNESCO, Torolalana momba ny fampiroboroboana sy ny fampiasana ny fimaroan-teny sy ny fahalalahan’ny rehetra hisitraka ny cyberespace
Vonona handray anjara ?
🇫🇷 Article également disponible en français.
Fanehoan-kevitra 1 ao amin’ny Tena mbola ilaina ve ny hanao tranonkala amin’ny teny malagasy ?
Pingback: A quoi bon promouvoir un internet malgachophone ? - @andrinivo
Hametraka valiny Aoka ihany
Tsy maintsy miditra ianao raha hametraka resaka.
Hanaraka ity blaogy ity